Home Wararka Ruushka oo xabad joojin ku dhawaaqay
Ruushka oo xabad joojin ku dhawaaqay
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruusha ayaa labo magaalo oo ku yaalla Ukraine uga dhawaaqday xabad joojin ku meel gaar ah iyo inay fureyso marinada gargaarka lagu gaarsiinayo shacabka laga bilaabo 10:00 subaxnimo wakhtiga Moscow.
Mariupol waa deked leh, maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku hareereysnaa ciidamada Ruushka, sidoo kale waxay dagaallo ka dhaceen magaalada Volnovakha.
Mar sii horreysay duqa magaalada Mariupol wuxuu codsaday in shacabka loo ogolaado in halkaa ay isaga baxaan kadib waxa uu ku tilmaamay go’doominta ciidamada Ruushka ee magaalada.
Dhinaca kale, qaraxyo dhowr ah ayaa laga maqlay magaalada Kharkiv.
Previous articleAKHRISO: Magacyadda 16-ka xildhibaan ee maanta lagu doortay Magaalada Boosaso
Next articleMuxuu Fahad Yasin u diidan yahay Xildhibaan Aamino Maxamed?
[Midowga Musharaxiinta] Muddo xileedka Farmajo wuu dhammaaday mana aha Madaxweynaha JFS
Diyaarado dagaal uu duqeeyn ka fuliyay Bu’aale!!